Drogba oo xaqiijiyay in Frank Lampard uu ku dhow yahay shaqada tababarka ee kooxda Chelsea – Gool FM
Drogba oo xaqiijiyay in Frank Lampard uu ku dhow yahay shaqada tababarka ee kooxda Chelsea
(London) 23 Junyo 2019. Halyeeyga reer Ivory Coast ee Didier Drogba ayaa xaqiijiyay in halyeeyga Blues ee Frank Lampard uu ku dhow yahay inuu tababare u noqdo kooxda reer London ee Chelsea.
Chelsea ayaa ah macalin la’aan kaddib markii uu Maurizio Sarri ku biiray xagaagan kooxda reer Talyaani ee Juventus.
Maurizio Sarri oo ku sugnaa garoonka ku yaala galbeedka magaalada London ee Stamford Bridge mudo hal xili ciyaareed oo kaliya, ayaa wuxuu Chelsea ku hogaamiyay ku guuleysiga koobka UEFA Europa League, wuxuuna sidoo kale u suuragaliyay in booska 3-aad ay kaga dhameysaan dhanka kala sareynta horyaalka Premier League.
Kaddib bixitaanka Maurizio Sarri waxaa la xiriirinyaa in badalkiisa uu noqon doono halyeeyga kooxda Chelsea ee Frank Lampard, kaddib markii uu si wacan u maamulay xili ciyaareedkan naadiga Derby County.
Sida laga soo xigtay shabakada “Sky Sports” Didier Drogba ayaa boggiisa rasmiga ah ee Instagram-ka ku soo qoray fariin uu ku xaqiijinayo sida uu Frank Lampard ugu dhowyahay shaqada tababarka ee kooxda Chelsea.
“Kumaa noqon kara macalinka ku haboon shaqada tababarka ee kooxda Chelsea? Qofka hadda wada xaajoodka kula jiro kooxda waa Frank Lampard”.
Didier Drogba ayaa la waydiiyay waqtiga sida rasmiga ah loogu dhawaaqi doono Frank Lampard inuu yahay macalinka cusub ee kooxda Chelsea ayuu ku jawaabay:
“Isdejiya, wax walba waa la shaacin doonaa”.
Casemiro oo seegi doona kulanka quarter final-ka Copa America & sababta ka dambeysa.